Faritra Atsinanana: 68 ireo matin’ny kitrotro | NewsMada
Faritra Atsinanana: 68 ireo matin’ny kitrotro
“6 000 ireo trangana aretina kitrotro tao anatin’ny faritra Atsinanana ary 68 amin’ireo ny namoy ny ainy manerana ny distrika mandrafitra ny faritra Atsinanana”, hoy ny talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka, ny Dr Rakotoarimanana Raymond, ny herinandro teo. Nanteriny anefa fa fomba hiarovana izany ny fanaovana vaksiny raha mbola tsy voany. “Rehefa voany kosa ka sitrana, ilaina ihany koa ny manao vaksiny tsy hiverenany. Ho antsika ray aman-dreny, aoka tsy handefa ny zanatsika hianatra raha hita fa misy famantarana fa ho voan’ny kitrotro ny ankizy. Ento avy hatrany eny amin’ny mpitsabo mba tsy hihombo ny aretina”, hoy ihany izy.
Etsy andaniny, tonga tao amin’ny sampana fitsaboana ankizy etsy amin’ny hopitaly Toamasina ny avy amin’ny antoko Freedom nitondra ny anjara birikiny ka nanolotra kidoro miaraka amin’ny fonony miisa 20. Nitarika izany i Vololoniaina Aniella Elisabette. “Fanombohana ihany fa mbola hitohy ny ezaka hiara-mandray anjara amin’ny ady atao amin’ny valanaretina. Tafiditra amin’ny velirano 13 an’ny filoha Rajoelina amin’ny
fanatsarana ny lafiny fahasalamam-bahoaka izany“, hoy hatrany i Aniella.
Nandray ny fanomezana kosa ny Dr. Rakotoarisoa Heriniaina. “Nihena ny marary, saingy mbola tsy foana tanteraka. Miisa 11 sisa ny tsaboina ao amin’ny sampana fitsaboana ankizy voan’ny kitrotro”, hoy ity mpitsabo ity.